Iwo gumi akanakisa maguta muMorocco | Absolut Kufamba
kuvake Yakasikwa neSketch.
Bhuku rekurenda mota
Iwo gumi akanakisa maguta muMorocco
Susana Maria Urbano Mateos | | Morocco
Yakazara kara, kudziya uye runako, Morocco inodarika runako, kubva kuMakomo eAtlas anoshamisa anotambanudza nyika, ine gungwa rebhuruu rakajeka rakatarisana nezhizha pamwe nendarama dzejecha rerenje. Nyika iri zvakare kumusha kumaguta asingaverengeke akanaka, rimwe nerimwe richiwedzera ku yakasarudzika mamiriro uye tsika yeMorocco.
Takatarisana ne nyika izere nenhoroondo netsika iyo yatinowana mune imwe neimwe yemakona ayo uye, pamusoro pezvose, mumaguta ayo akavanzika kwazvo. Kana iwe uchitsvaga iyo nzvimbo dzakanakisa dzekushanyira kana kudzima muMorocco, heino runyorwa rwako rwakanakira kuchengetedza.
Guta rakanaka regungwa Kumahombekombe ekuchamhembe kwenyika, Asilah ine nhoroondo yakapfuma uye dzakasiyana. Iine midzi inotangira muzana ramakore rechiXNUMX, payakanga iri munzira huru yekutengeserana yaishandiswa nevaFenikiya, yakazotorwa nevaPutukezi isati yauya pasi pehutongi hweMoroccan muzana ramakore rechiXNUMX.
Yese tsika inoteedzana uye nzanga yakasiya mucherechedzo wayo paguta, saka nhasi, Asilah chiratidzo chinonakidza chenhaka yakasarudzika yeMorocco. Nhare yechiPutukezi inosendamira nenzira isina tsarukano pamawere, nepo dzimba dzinoyevedza chena nebhuruu dzimba dzeMoroccan dzichizara mumigwagwa.
Inowanikwa mune inoshamisa Rif makomo kuchamhembe kweMorocco; Chefchaouen inozivikanwa neayo kurova dzimba dzebhuruu iri munzvimbo yekuvanda yakasvibirira girini uye shava yenzvimbo yemakomo.
Mapopoma eguta pasi pechikomo, imwe neimwe nhanho nyowani inoratidza zvivakwa zvakasarudzika, zvinomera zvine mavara, uye makofi anoyevedza. Chikamu chekare cheguta chakakanganiswa zvakanyanya neiyo Andalusian uye Islamic chivakwa, kubva pamadziro ebhuruu akapendwa uye matenga matsvuku ematairi, kune iyo iconic kiyi yakaumbwa madhoo uye matairi nzira kuburikidza neguta.
Kunyangwe paine mukurumbira wezvekutengeserana nekuwedzera kwevashanyi, Chefchaouen inoramba iri nzvimbo yakanaka yekusangana neMorocco mhandara uye yakasarudzika.
Inowanikwa mu kumadokero kwemahombekombe eMorocco, uchitevedza gungwa rinopenya uye nemhenderekedzo dzejecha dzakapfava, Essaouira Icho chimwe chezvakavanzika zvakachengetedzwa zveMorocco, zvakanyanya kuchengetedza ruzhinji rwevashanyi vanotsvaga zuva nekuda kwemhepo mamiriro. Kunze kwerunako rwepanyama rwakatenderedza guta iro pacharo Essaouira inozivikanwa nezvivakwa zvinokwezva maziso, masokisi anofadza, uye chiteshi chengarava chinofamba, izere nezvikepe zvine mavara.
Kubva pachiteshi masvingo eguta anokwira, kutenderedza nzvimbo pamusika wakajeka unodhonzwa, dzimba chena nemigwagwa inomonereka. Masvingo eguta anozvirumbidzawo neakanaka maonero enharaunda, kubva zvivakwa zvakaunganidzwa zveguta kune Purpuraires Iles Kure.
Sezvakaita rechipiri guta rakakura muMorocco, FesNekudaro, ichine zvese zvinofadza uye hunhu hweguta diki kwazvo. Guta rine medina mbiri dzekare, chimwe chazvo - Fes el Bali - Yakave yakatarwa seNzvimbo Yemagariro Saiti yezvivakwa zvakaomarara zvekumhara, souks, matare, pamwe neyunivhesiti yekare kwazvo pasirese.
Guta rese rakazara nemimwe mienzaniso yakasarudzika yekuvakwa kweIslam, kubva kunguva dzekare kusvika kumamosque makuru, ese akashongedzwa zvakanaka nematiles uye arabesque, zvichiita kuti guta rive miziyamu yekunze.
Ifrane iri rimwe remaguta anoshamisa kwazvo muMoroccoIyo yakafanana neguta reSwitzerland remakomo kupfuura maguta emunyika yaro erenje uye nekuvakwa kweArabhu. Ikozvino kushongedzwa kweguta kwakakonzerwa muchikamu chikuru kune iyo French colonization, uyo akavaka guta senzvimbo yekutizira mukati memwedzi inopisa yezhizha, Ifrane iri muAtlas Mountains ine sinou munguva yechando.
Zvakare nemapoka ezvishongedzo zve European-yakafuridzirwa chalet, iro guta uye rinomiririra huwandu hwayo hukuru hwemapaki uye mapindu, ichigadzira oasis yekufara uye runyararo mukati memubishi uye hupenyu hweMoroccan.
Rimwe remaguta inonyanya kufarirwa muMorocco, Marrakech yave nzvimbo isingadzivisike mumakore achangopfuura kune avo vanoshuvira kusangana neiyo runako rweMoroccan nhoroondo uye tsika. Guta rekare rine mukurumbira pamisika yaro yakawanda, ine maze yemakoto uye masokisi anoratidza hupfumi hutsva pese pese - kusanganisira zvinonhuwira, machira ane mavara, marambi anopenya uye zvishongo.
Nzvimbo yakatenderedza yakakomberedza guta inokatyamadza zvakaenzana, sejecha rinokurumidza regwenga rinotambanuka kubva muguta, ichinakidzwa nekugutsikana kwemakomo eAtlas akafukidzwa nechando ari nechekure.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Iwo gumi akanakisa maguta muMorocco
Tsika nemagariro enharaunda yechiPutukezi
5 magadheni eMarrakech aunofanira kuziva
Sarudza kuenda Albacete Alemania Amsterdam the national Argentina Chania Ositireriya Ositiriya Avila Badajoz Badalona Barcelona Benidorm Brasil Burgos Cádiz Kanadha Canary Islands Caribbean Castellon China Ciudad Real Korombiya Córdoba Korea Croacia Kiyuba Cuenca Denmark USA Ijipiti Elche España Philippines France Gijon Granada Greece Guadalajara Holland kong Huelva Hungary Ibiza India England Ireland Italia Japan Sherry León Lisboa London Madrid Mallorca Marbella Morocco Minorca Merida Mekisiko Miami Milan Murcia Norway New York Namata vamwe Oviedo Paris Peru Putugaro Prague Dominican Republic Roma Russia Salamanca Suecia Switzerland Tenerife Toledo Uruguay Venezuela Vitoria
Joinha Absolut Viajes zvemahara uye gamuchira nhau dzichangoburwa nezvekufamba uye kushanya muemail yako.
4 Imi Mahotera
Yangu Kubhadhara Mota